AMAKHONKCO OMTSHATO WECAMO-IMISESANE YOKUZIBANDAKANYA YECAMO - UTHETHATHETHWANO
Eyona Uthethathethwano Amakhonkco omtshato angama-Camo angama-63 kunye neeRandi zokuzibandakanya
Amakhonkco omtshato angama-Camo angama-63 kunye neeRandi zokuzibandakanya
Fumana yonke into oyifunayo ukuzingela amakhonkco omtshato ogqibeleleyo. Ukuhlaziywa kwe-Sep 10, 2020 Sifake iimveliso zomntu wesithathu ukukunceda uhambe kwaye wonwabele awona maxesha makhulu obomi. Ukuthengwa okwenziwe ngekhonkco kweli phepha kungasifumana ikhomishini.
Igolide, iplatinam ... camo? Inkcubeko ayisiwo wonke umntu, kwaye nangona ukuzingela kunokuba kugqityiwe malunga nokufumana iqabane eligqibeleleyo, ngoku lixesha lokuba ulandele amakhonkco alungileyo ukubonisa ukuzibophelela kwakho komnye nomnye. Zihambile iintsuku apho amakhonkco okuzibandakanya kunye neebhendi zomtshato zazithetha iindlela ezilula kunye nesinyithi sendabuko. Ukusuka kwindalo yesiko ukuya kukrolo oluhle kunye nolunye uhlobo lwesinyithi, namhlanje kukho amakhulu eendlela zokubeka owakho ubuqu kubucwebe bakho bomtshato. Ke kutheni ungakhethi umsesane womtshato owahlukileyo njengoko unjalo? Amakhonkco omtshato e-Camo amlungiselela kunye naye kunye neekamo zokuzibandakanya camo zigqibelele isibini esithanda ngaphandle. Njengombono? Jonga lonke ulwazi lwethu malunga nokuthenga iseti yomtshato we-camo okanye iringi yokuzibandakanya ye-camo apha ngezantsi.
Iqela lomtshato lamadoda camo
amakhonkco omtshato camo yabafazi
amakhonkco omtshato epinki
amakhonkco omtshato aluhlaza camo
Iiseti zomtshato camo
iicamo zokubandakanya amakhonkco
Idayimane yokwenyani kunye neGem Camo yokuzibandakanya kwemisesane
phi ukuthenga amakhonkco omtshato camo
Ushwankathelo lweepateni zeCamo
Ukusuka kwi-camo yekhephu ukuya kwi-calt yeRealtree nayo yonke into ephakathi, kukho phantse iipateni ezininzi zekhamera njengoko kukho imibala emhlophe. Apha ngezantsi kukho ezinye zeendlela zekhamera ezisetyenziswayo.
Ukuzifihla kokuzimela kusetyenziswa ngabazingeli ukudibanisa indawo abakuyo ngokulinganisa indawo ethile. Olu hlobo lokuzifihla lusebenzisa iithoni zomhlaba njengombala osisiseko ogqunywe ngemifanekiso yamasebe emithi, amagqabi kunye nolunye udidi lotyani, kodwa ungayifumana ngemibala eqaqambileyo enjengepinki, orenji, bomvu, nemfusa.
Ngokungafaniyo nokuzingela okufihliweyo, okunemifanekiso entsonkothileyo necacileyo yohlaza, ukufihla komkhosi kusebenzisa iindlela ezintsonkothileyo kunye nokudityaniswa kombala ukwenza lowo unxibileyo angabonakali okanye kube nzima ukufumanisa.
1. Umkhosi weCamo
I-camo yomkhosi ibhekisa kwiindlela ezimbini zokufihla: i-camo ye-woodland okanye i-camo yedijithali (jonga iinkcazo ezingasentla). Ezi patheni zimbini zibonisa iintlobo ezimbini zokugqibela zokufihla ezisetyenziswa ngumkhosi wase-US.
2. I-Camo yangempela
I-camo eyi-Realtree luphawu oluthandwayo lokuzimela ngokufihlakeleyo olwaziwayo ngeendlela zalo ezizodwa ezinemilinganiselo eyahlukeneyo eyahlukileyo eyahlukeneyo.
uhamba phantsi iingoma zomtshato
3. Umzingeli Camo
Njenge-camo eyi-Realtree, ikham ye-Predator ikwaluhlobo lokufihla ukuzingela. Ngokungafaniyo neRealtree Camo, esebenzisa iipateni ezi-3-D, i-Predator camo isebenzisa itekhnoloji evulekileyo ebonakaliswa yimifanekiso engqindilili, egalelwe ngokungaqhelekanga yamagqabi kunye namasebe ngokubonakala okuphezulu.
4. kunye no 5. Pink Camo
I-camo epinki iziva icacile njengowesifazana, kodwa isasebenza. Ukusuka kwiipateni zemizobo emi-3-D enezityalo eziyinyani ukuya kwisitayile samaplanga, phantse yonke ipateni ye-camo kwintengiso iza ngomthunzi wepinki.
6. ICamo yedijithali
Le patheni yecamo inokukhangeleka iqhelekile- yayiyipateni yokuhamba komkhosi oxhobileyo wase-US kude kube ngo-2014. Ngokwesiqhelo uya kuyifumana ngee-shades ezingwevu, nangona ezinye iinketho ezinemibala efana neblue noluhlaza nazo ziyafumaneka.
7. Intlango Camo
Intlango efihlakeleyo isebenzisa imibala eyahlukeneyo yetan, emdaka kunye nomnyama ukwenza into eyaziwa ngokuba yipateni yetshokholethi. Amanqanaba amdaka kunye ne-tan agqunywe ngamaqoqo amabala amnyama namhlophe ukulinganisa indawo enamatye, entlango.
8. I-Woodland Camo
Xa ucinga ukuzifihla, into yokuqala ethi qatha engqondweni inokuba yile patheni yekhamera yakudala. I-camo yaseWoodland yayisetyenziswa ngumkhosi wase-US phakathi kwe-1981 kunye ne-2006 kwaye isebenzisa umahluko omkhulu, ukuphazamisa ipateni yomhlaba, iithoni ezingathathi hlangothi njengesanti, emdaka, luhlaza kunye nomnyama.
9. ICamo yasezidolophini
Usebenzisa umahluko omkhulu ofanayo, ipateni ephazamisayo njenge-Woodland camo, i-camo yasedolophini yenzelwe ukudibanisa kwimimandla yasezidolophini, nangona isetyenziswa rhoqo kwifashoni kunasentsimini. Imibala eyahlukeneyo engwevu yenza umbala wombala wolu hlobo lwepateni.
10. I-Tiger Stripe Camo
Yenzelwe indawo yehlathi elishinyeneyo, i-tiger stripe camo isebenzisa uthotho lwe-tiger-stripe-ephefumlelweyo ye-brushstrokes eluhlaza, emdaka kunye nomnyama. Le patheni yecamo yayisetyenziswa ngexesha leMfazwe yaseVietnam.
11. Ikhephu Camo
I-camo yekhephu yenzelwe ukusetyenziswa kwiindawo ezinekhephu. Ibonakaliswe ngasemva okumhlophe, ngokuchaseneyo nomgangatho oluhlaza oluhlaza okanye omdaka, kunye notyani obunqabileyo bamaxesha onyaka (amagqabi, amasebe kunye nesilumko).
Iibhendi zoMtshato zeCamo yamadoda
Ubucwebe bunokuba yintengiso enzima kumfana-nokuba kuziwa kumabhanti omtshato-ke kubalulekile ukuba ufumane olungele isitayile sakhe esahlukileyo. Amaqela omtshato wokuzingela kunye nemitshato yamadoda camo yomtshato lolona khetho lufanelekileyo kumfana onesitayile esirhabaxa kunye nothando lwangaphandle. Ngokwesiqhelo zenziwe ngolunye uhlobo, izinyithi zangoku ezinje nge-titanium, cobalt, intsimbi engenasici kunye ne-zirconium, la mabhendi omtshato we-camo akhiwe nzima. Ukusuka kwiindidi zeekamo (I-camo eyiRealtree, i-Mossy Oak kunye neKing's Mountain Camo zithandwa kakhulu) kwisinyithi esinyithiweyo kunye nedayimani emnyama, ukhetho alunasiphelo, ke awuyi kuba nangxaki ekufumaneni ibhendi yohlobo oluthile Ndiyakuthanda.
1. Le camo yomsesane wekamo yokufaka ikhephu iyathamba kwaye inobuqili, kodwa isakwazi ukwenza ingxelo enkulu. Amabhanti amabini acekeceke e-Aerospace yeBanga le-titanium yesakhelo sebusika ophefumlelweyo ophefumlelweyo, ongeze umaleko wobukhulu kunye nokuthelekisa ukunika umsesane ukubukeka okumangalisayo, okwangoku. Ingcebiso: Iiringi zeTitanium azinakulungiswa, kufuneka ziphinde zenziwe, ke qiniseka ukuba ubungakanani bakho buchanekile ngaphambi koku-odola. Yithenge: Iringi yekhephu eyiRealtree camo, $ 396, TheJew jewelrySource.net
2. Yenziwe nge-tungsten eyomeleleyo, lomtshato we-camo lukhetho olufanelekileyo kwindoda yanamhlanje ekuhambeni. Isinyithi esityibilikisiweyo kunye nesicatshulwa esinye sedayimani emnyama simtsala kwaye sihle. Kodwa iinkcukacha ezimileyo, indawo yokufihla eluhlaza okwesibhakabhaka engqamene nemiphetho ebiyelweyo, inika le ring ukuba ibe ngumphetho ophambili. Yithenge: Idayimani emnyama yamadoda eluhlaza okwesibhakabhaka yokufihla ibhendi yomtshato, $ 349, Triton, Helzberg.com
3. I-Classic kunye nemveli, kodwa nge-twist ye-twist, le bhanti yomtshato we-karati ye-14 ye-karat ifanelekile kumntu ofuna isitayela esingapheliyo kunye nomda wangoku. I-camo efakwe ngaphakathi kwindandatho, eboniswe ngentla kwiKing's Camo Woodland Shadow, inokwenziwa ngokwezifiso, ukuze ukwazi ukunika iringi yakho ukubamba kwakho. Yithenge: 14 ikarati yegolide yesangqa somthi, $ 1,050, YikingCamo.com
Zine. Ukuba ujonge umsesane oza kuma kuvavanyo lwexesha (njengoko inokuthatha ukunxiba kunye nokukrazula) ngaphandle kokuyekisa inkangeleko, le bhanti yomtshato we-cobalt chrome camo yile yiyo . Iipropathi zentsimbi eyomelele kakhulu zikunika okona kulungileyo kuwo omabini amazwe-inqanaba eliphezulu lokuqina kunye nokubonakala okuqaqambileyo okubonakala kwegolide emhlophe. I-camo inlay enesimo kunye neenkcukacha ezenziwe ngehamile zinika umsesane imbonakalo eyahlukileyo, ebonakalayo eya kuyithanda. Yithenge: I-cobalt i-chrome yentsimbi ye-camo ring, i- $ 499, Titanium-Buzz.com
5. Phakathi kwendalo ye-camo ephefumlelweyo yoyilo kunye nokufakwa kweenkuni, le ndandatho ye-tungsten yenye yezohlobo. Isangqa senziwe ngesandla kwaye sisebenzisa iinkuni ze-koa zalapha ekhaya zokufakelwa kwindawo esembindini ukongeza into yobushushu. Iringi iyanqabana kakhulu, kunye necobalt kunye nenickel yasimahla, iyenza ikhuseleke kulusu olubuthathaka. Yithenge: I-Camo ipateni ye-tungsten ring khabhdi nge-koa inlay, $ 55, HappyLaulea, Etsy.com
6. Inlayed nge Realtree camo pattern, le zirconium camo yomtshato iringi yomtshato ngokuqinisekileyo iya kuba yinto yokubetha kunye nomzingeli okanye umntu ongaphandle efuna into eyahlukileyo eyahlukileyo. Ukuqina okuzinzileyo kunye nokumelana ne-corrosion, i-zirconium lukhetho olukhulu kumfana othanda ukungcolisa izandla zakhe. (Asidlali - le nto isetyenziselwa ukwakha izixhobo zenyukliya!) Kwaye, umbala omnyama uyenza izive intsha kwaye yeyangoku. Izinto ezilula, ezingenabungozi nazo zenza ukuba lukhetho olufanelekileyo kulusu olubuthathaka. Yithenge: Intuthuzelo ye-Inlay ilungile iringi emnyama ye-zirconium, $ 349, Zales.com
7. Ubunkunkqele kunye nezinto zangaphandle ziyahlangana kule bhanti yomtshato we-camo. Umdaka omnyama we-Realtree AP ye-camo inlay yindlela ehlaziyayo yeepateni zekhamera esemgangathweni. Eyilwe ngamacwecwe amabini e-titanium ekhazimlisiweyo, le ndandatho ye-camo inika indawo enomtsalane yomxinwa kwaye icokisiwe. Yithenge: I-Black Realtree AP camo yomtshato webhendi, $ 396, TheJew jewelrySource.net
8. Yenziwe ngeenyamakazi zokwenyani kunye neempondo, le band yomtshato yenziwe ngesandla liphupha labazingeli. I-camo emnyama ebethelwe ngokuchasene nomqolo wophondo lwendlovu olwenziwe kwinto yokuphalaza indalo kudala umohluko okrwada nesibheno esiluhlaza, esirhabaxa. Isangqa sifakwe titanium kulwakhiwo olomeleleyo kwaye sitywinwe ngesiphelo sokukhusela ukukhusela emanzini. Yithenge: Isangqa se-Camo nge-antler kunye ne-titanium band, ukusuka kwi- $ 400, kwi-Stag Head Designs, Etsy.com
9. Inkulu kwaye inesibindi, le ring ye-camo ye-10-millimeter-wide camo ineqhina lokwakha i-titanium eqinileyo, amacala e-titanium kunye ne-camo inlay. Inlay nganye 3-iimilimitha ububanzi kwaye ungenziwa ngemfuneko kunye camo ipateni oyikhethileyo kwaye yahlulwe kaloliwe titanium kaloliwe ohamba embindini wesangqa. Le yeyona bhanti yomtshato yokugqibela ye-camo yomntu ofuna ukugqama. Yithenge: Umgqomo ophindwe kabini we-camo ring, $ 269, Realtree.com
10. Yenziwe nge-titanium ecekeceke kwaye yomelele, le bhanti yomtshato ye-camo inebhanti ye-Realtree AP okanye i-Realtree Max-4 camo kunye ne-smart beveled edge ye-understated, yangaphandle-ephefumlelweyo ejongeyo. Ibhendi ebanzi yeemilimitha ezi-6 inyanzelisiwe ukuba ibe yinkazimlo eqaqambileyo, kwaye ngaphakathi kwendandatho efanelekileyo yokuthuthuzela kunokukrolwa, ukuze ube nakho ukongeza ukubamba okungaphezulu komntu. Yithenge: Isangqa se-camo yeTitanium, $ 275, Realtree.com
Amakhonkco omtshato amaCamo amaKhosikazi
I-Camo ayisiyabafana bodwa. Amanenekazi ayayithanda i-camo, ke kutheni emvumela ukuba onwabe? Abenzi bemisesane yomtshato bakuva-yiyo loo nto sele beqalisile ukwenza imigca yesiko yecamo yomtshato eyilwe nabafazi engqondweni. Nokuba ufuna ilula kwaye imnandi, inesibindi kwaye inyulu, okanye iklasikhi kwaye intle, kukho into yomfazi oqondayo onxibe i-camo. Ukusuka kumtshato womtshato weqhwa camo ukuya kwiibhubhu ezinamachaphaza edayimane kunye nemisesane yomtshato epinki, jonga le ngqokelela yeengqokelela zomtshato we-camo ukuqala ukukhuthazeka kusuku lwakho. Sizimisele ukubheja ukuba uya kubathanda bonke!
1. Ukuba ungaphezulu kokujongeka okunesibindi, le band ye-5-millimeter emhlophe emnyama zirconium band lukhetho olufanelekileyo. Ngeprofayili ethe tyaba, i-camo inlay kukhetho lwakho lwe-Realtree AP, Realtree Max-4 okanye i-Mossy Oak Break Up yeepateni zekamo, kunye nentuthuzelo efanelekileyo, uya kufuna ibhendi yomtshato we-camo ehambelana nayo! Yithenge: Amanenekazi amnyama zirconium amakhonkco amancinci e-camo, $ 289, Titanium-Buzz.com
2. I-camo yekhephu imemeza nje ngomtshato, kodwa le bhendi yomtshato yi-King's Camo ithatha izinto ukuya kwelinye inqanaba kunye nephethini yekamo yekhephu ebonakaliswa ngokungafaniyo okukhanyayo ukusuka ekukhanyeni ukuya kumnyama ngemibala ebonakalayo kunye nezithunzi ezinika ukuthamba kunye nobunzulu. I-cobalt ye-chrome ebhendiweyo ibhendi yeemilimitha ezi-5 kwaye inoyilo lwesiko ledome. Yithenge: ICobalt chrome band kwisithunzi sekhephu, $ 250, YikingCamo.com
3. Ngaba ufuna into engalindelekanga kodwa hayi ngaphezulu ngokupheleleyo? I-maroon Realtree camo band yomtshato yile nto uyikhangelayo. Isangqa sidibanisa iphethini ye-calt ye-Realtree AP oyithandayo nge-twist epholileyo-inqabile, imvelaphi enzulu yemaroon egcwalisa iithoni zomhlaba zomhlaba. Ibhendi ye-titanium engasindi kwaye intle kakhulu yakhiwe ukuze ihlale ixesha elide kwaye yenzelwe ukonwaba okufanelekileyo. Yithenge: I-Maroon Realtree camo band band, i $ 250, Titanium-Buzz.com
Zine. Ayisiyo yeentyatyambo zodonga, eli bhanti lomtshato limdaka elimfusa eliyalela ingqalelo. I-camo emsobo yinyani eyonwabisayo, edlalayo kwiipateni zekhamera yakudala kunye nepinki. Le ndandatho engaqhelekanga ngokuqinisekileyo yeyomfazi onesibindi sokwahluka kancinci. Izinto ezomeleleyo kwindawo ephezulu yokuqaqamba zinika umsesane ukubonakala okukhanyayo. Yithenge: Isangqa se-camo e-Purple Realtree, i- $ 426, iiRandi eziQinisekisiweyo ngokusemthethweni. Amazon.com
5. Uhlobo lwenzondelelo yempambano luya kuyitshintsha ngokupheleleyo le bhanti yomtshato. Yenziwe nge-Mossy Oak's Duck Blind camo pattern. Eyilwe ngumfazi wamanje ekuhambeni, iringi yenziwa ukusuka kwizinyithi ezikumgangatho ophezulu ezomeleleyo, ezentofontofo kunye nefashoni. Ngaphakathi kwindandatho ijikelezwe ukwandisa intuthuzelo. Yithenge: Idada eyimfama e-Mossy Oak ring camo, $ 426, Imisesane yokuBuyiselwa iiLayisensi ngokusemthethweni, Amazon.com
6. Ndinqwenela ukuba unxibe eyakho ilokhwe yomtshato ye-camo yonke imihla? Ngoku ungathatha isiqwenga sayo nawe naphi na apho uya khona kunye nomtshato womtshato weRealree camo band. Ipateni emhlophe yekhephu emhlophe iya kukuphinda ubuyele kumhla owawusithi 'ndenza' ngalo lonke ixesha ujonga. Umbala ococekileyo, ocekeceke we-camo uboleka iringi ukuthamba, ukuziva njengowasetyhini. Uyakuthanda ukujonga? Khetha ibhendi ehambelana nendoda yakho oza kuba yiyo. Yithenge: Ibhendi yomtshato wohlobo lweCamo lwesiqhelo, $ 426, Imisesane yokuBuyiselwa iiLayisensi ngokusemthethweni, Amazon.com
7. Le bhanti yomtshato yacamo yayilelwe ngentombazana entle yelizwe. Iringi ibonakaliswa nge-5-millimeter, iprofayile ye-titanium ethe tyaba ene-3-millimeter inlay yecamo enokwenziwa ngokwezifiso (khetha kwiRealtree Max-4, Realtree AP, Mossy Oak Break Up kunye neMossy Oak Infinity) ekwahlulwe kuwo omabini amacala iringi. A .05-carat Faka idayimani inika iringi encinci glitz. Iqabane elihle kwindandatho yokuzibandakanya kwe-camo! Yithenge: Umsesane wedayim camo, $ 475, Titanium-Buzz.com
8. Isibindi kwaye sikhanyisile kunayo nayiphi na ibhendi yomtshato ye-camo kwintengiso (ngaphandle komfusa oko kukuthi!), Le ndandatho yomtshato ibomvu ayisiyo eyomfazi ofuna ukudibanisa, kodwa yeyomfazi onomdla, onesibindi nothanda ukwenza ingxelo. Iringi isebenzisa iprofayili ekhethekileyo yedome titanium band yomelele kwaye inesitayile sokuqaqambisa umlilo okhawulezileyo wecamo. Yithenge: Iringi ebomvu yomtshato obomvu, $ 250, Titanium-Buzz.com
9. Ukutyeba ngokotyebileyo, i-camo eluhlaza eluhlaza ngokuqinisekileyo iya kwenza abahlobo bakho babe luhlaza ngomona. Umbala onqabileyo unika iringi ye-rustic imvakalelo encinci yolawulo. Inamo ye-camo inqamlezwe ziingqameko ezincinanana, ezigudileyo ze-titanium eziqhuba yonke ububanzi bendandatho. Ibhendi yenzelwe intuthuzelo ephezulu nayo, ke ngekhe ufune ukuyikhupha. (Kodwa emva koko, kutheni?) Yithenge: Iringi eluhlaza ye-AP, $ 250, Titanium-Buzz.com
10. Umfazi onomdla wokusebenziseka kunye nokwenziwa kweklasikhi (ungasathethi ke ngomnqweno wangaphandle) uya kuyifumana le ndandatho ilula, iflethi yecamo ekhangeleka ngokukodwa. Ibhendi ye-zirconium ehlala ixesha elide kwaye inobunzima kwaye inendawo efanelekileyo yokuthuthuzela iya kubhenela kwicala lakhe elinengqiqo, kodwa i-camo ebukekayo, ethandekayo enepateni yokufihla i-Realtree iya kubamba umdla wayo kwaye ivumele ukuba inike umsesane ubuqaqawuli bobuqu. Yithenge: Umsesane wamakhosikazi we-camo, $ 199, Titanium-Buzz.com
Imisesane yoMtshato ePinki
1. Le ring ye-camo yomtshato iyi-classic. Umtya wecamo leRealtree kumbala opinki oswiti, obufazi obhinqileyo wehla usiya embindini we-5-millimeter-wide wide titanium band with edges polished. Isimo sengqondo se-no-frills sale bhanti senza ukuba kulungele ukudibanisa kunye nesangqa sokubamba ingqalelo, kodwa sinokuzibamba. Yithenge: Iprofayile yeflethi Realtree AP yomtshato wepinki, $ 285, Realtree.com
2. Ngezixhobo zayo ezikumgangatho ophezulu, uyilo lokutsala amehlo kunye nenqaku elifikelelekayo lamaxabiso, ngokuqinisekileyo uya kufuna ukuqaphela eli camo band. Yenziwe nge-ceramic yendlovu, into elula kwaye enganyangekiyo kwii-alloys eziqhelekileyo, uya kufumana zonke izibonelelo zezinto ezinje nge-tungsten kunye ne-titanium ngexabiso eliphantsi kakhulu. I-camo inlay inlay pops ngokuchasene ne-ceramic band kunye ne-.010-carat cubic zirconia yongeza into encinci. Yithenge: Isangqa somtshato eshushu esipinki yodongwe, $ 155, I-Ice Empire jewelry jewelry, Amazon.com
3. Le ring yomtshato ipinki ithatha izinto ukuya kwinqanaba elilandelayo ngoxinzelelo olusetwe isafire epinki. I-camo ye-Pink Mossy Oak camo efakwe kwi-cherry blossom epinki yongeza kwimbonakalo yobunkunkqele beli cwecwe lobucwebe. Ujikeleze, imiphetho epholileyo ivumela ukuba kube lula, kufanelekile. Yithenge: Amasongo omtshato epinki asafire, $ 396, TheJew jewelrySource.net
Zine. Umbala opinki omnandi wale bhanti yomtshato yodongwe awulindelanga kwaphela kwaye ungowokuqala. Ujxtaposing ulwakhiwo olomeleleyo (i-ceramic iyamangalisa ukuba inzima, ungasathethi ke ngexabiso elifikelelekayo) ngeenkcukacha zobufazi, njengephatheni yayo enemibala efihliweyo, eli qela lomtshato lolona khetho lufanelekileyo kunxiba i-camo, umfazi onothando ngaphandle. Yithenge: Ibhendi yomtshato yodongwe yokufihla, $ 150, David Jewelers, Amazon.com
5. Isangqa somtshato esihle se-camo ngu-Realtree Camo obhinqileyo i-camo epinki enombala wokuqaqamba (ukusuka kwi-.05 ejikeleze idayimani ukuba ibe ngqo) ukubukeka komzingeli we-chic. I-3-millimeter ye-camo inlay isetelwe ngokuchasene ne-5-millimeter-wide wide-bright and stoby cobalt chrome band. Iringi nganye isebenzisa ipateni eyahlukileyo ukuqinisekisa ukuba akukho zimbini ziyafana. Yithenge: Amanenekazi e-Realtree AP apinki yedayimane, $ 629, Realtree.com
6. Ngemicu yentsimbi ebunjiweyo, eli bhanti lomtshato lisisiqwengana emacaleni - kodwa ngendlela elungileyo. Yenzelwe intombazana engafuniyo ukudibanisa, le bhanti ye-camo iyamangalisa kwaye ayiqhelekanga. Umtya wepinki omthubi Mossy Oak camo unika iringi ukuthinta okucokisekileyo kwabasetyhini ngaphandle kokuphulukana ne-rustic, woodland vibe. Yithenge: Isangqa somtshato se-Mossy Oak, i-426 yeedola, iiRandi eziQinisekisiweyo ngokusemthethweni. Amazon.com
7. I-carbide ye-tungsten elukhuni kunye noyilo lwangoku lwe-camo luzisa eyona nto iphambili kule band yomtshato kaThorsten. Imiphetho emenyezelisiweyo ebunjiweyo inika umsesane ukubukeka okuqaqambileyo, ngelixa ipinki emhlophe emhlophe emhlophe ifaka umbala wombala odlamkileyo. Ibhendi ngokwayo yenziwe ngesinye sezinyithi ezinganyangekiyo, kodwa i-resin inlay ifuna ukhathalelo olungakumbi. Yithenge: Isangqa somtshato sase-Tungsten esenziwe ngombala opinki nomhlophe, $ 290, Thorsten, ILarsonJewelers.com
8. Ngokungafaniyo nezinye iintlobo zeephatheni ezipinki kwintengiso, ipateni ye-King's Camo's Pink Shadow camo inoluvo lobufazi. Amagqabantshintshi eentyatyambo anombala opinki athabatha indawo yamagqabi angaphandle emveli kunye nokuprinta kwesebe ukubonakala kothambileyo, nokuthamba. Olu lukhetho olufanelekileyo kumfazi ofuna into evakala iklasikhi kwaye ifana neladies ngomda ongaphantsi, wanamhlanje. Yithenge: Umsesane wesithunzi seTitanium, $ 250, YikingCamo.com
9. Ngelixa ingeyiyo i-camo ngqo, eli bhanti lilodwa linesibheno esingenakuphikwa. Ibhendi elula ye-titanium ecekeceke nge-satin yokugqiba ithembisa ukuzinza, ngelixa imikhondo ye-pink deer eqaqambileyo izisa umsesane ebomini. Ukhetho olufanelekileyo kumfazi ofuna isitayile esiphefumlelweyo somzingeli, kodwa ngaphandle kwecamo. Yithenge: Iringi epinki yomkhondo, $ 255, Titanium-Buzz.com
10. Ngaba ufuna ukuba isangqa sakho siphume esihlweleni? Yiya ngesibindi nge-zirconium emnyama camo band band. Umtya we-Realtree Pink camo wenza umahluko oqaqambileyo kunye nemiphetho yedome ebunjiweyo yebhanti emnyama. Isangqa sinokuphoswa ngegolide okanye ngeplatinam ukuba ukujonga okuqhelekileyo kukulandela. Yithenge: I-zirconium emnyama Realtree AP Pink Ring, $ 415, Realtree.com
Imisesane yeBlue Camo yoMtshato
1. Lo msesane womtshato we-camo oqaqambileyo emadodeni ngokuqinisekileyo ubambe amehlo. Iphethini ye-calt ye-Realtree ibeka ibhendi ebomvu yasebukhosini. Ngokuphathelele isinyithi, unokukhetha i-serinium okanye ujonge ngakumbi, yiya kuseto lwe-ceramic emnyama.
Yithenge: Isangqa somtshato we-camo eblue, $ 355, CamoKix.com
2. Le nombolo eluhlaza okwesibhakabhaka yinto oya kuyifumana yokuncoma kwiminyaka ezayo. Umbala oqaqambileyo wamanzi aluhlaza ubonakalisa uyilo olucekeceke lwamahlumela, iinaliti zepine kunye namagqabi, nto leyo eyinika umtsalane kunye nomtsalane wendalo. Isangqa somtshato se-camo yi-titanium enetywina le-acrylic.
Yithenge: Iringi eluhlaza camo titanium ring, $ 42, Etsy.com
3. La makhonkco athandekayo e-camo amisela yena kunye naye ngumdlalo owenziwe ezulwini. Ukufezekisa i-duo yangaphandle, le camo yomtshato iseti iza neringi ye-titanium ene-camo emnyama kuye. Ngokubhekisele kuye, unokukhetha ibhendi yomtshato ene-camo eluhlaza okwesibhakabhaka kunye nomsesane wokuzibandakanya ofanayo kunye nelitye elicwebezelayo, elibunjiweyo lentliziyo eli-zirconia.
Yivenkile: Yakhe kunye neekamo zakhe zangumsesane womtshato, Etsy.com
4. Enye iringi yecamo emenyezelayo imisela yena naye, le ringi-yomsesane iza kusenza sidangele. Iseti yomtshato wabasetyhini inezangqa ezintathu ezixineneyo. Enye ibandakanya uyilo oluhle lwekhephu oluhlaza okhephu okanye i-orchid camo, enye inesitye esinqabileyo sodwa, kwaye iringi yesithathu ibandakanya amatye angama-27 atshintshana aluhlaza namhlophe. Ngokuphathelele kwindandatho yakhe, ibonisa uyilo lwe-camo yehlathi okrwada, elincoma ngokugqibeleleyo iseti yakhe.
Ivenkile: 4 Piece ring camo blue camo ebekelwe yena naye, Etsy.com
5. Ilungele amadoda okanye abafazi, le ring yangaphantsi yomtshato we-camo yinto engathandekiyo kubathandi bangaphandle. Nokuba ukhetha ukunxiba amakhonkco e-camo aluhlaza okanye ufuna ukumothusa iqabane lakho ngolu luyilo lukhethekileyo, qiniseka ukongeza ukrolo olwenziwe ngokwezifiso ngaphakathi ukuze ulwenze ngakumbi. Le iringi ilula kwaye ineetanium.
Yithenge: Umsesane womtshato we-titanium oqokelelweyo, Etsy.com
Iiseti zeCamo zomtshato
Ukuba nobabini niyayithanda i-camo encinci ebomini benu, kutheni ungaqabuli ubomi bakho obutsha obutshatileyo kunye namaqela omtshato afanayo abhiyozela uthando lwenu lwangaphandle kunye nokuzinikela omnye komnye? Khetha iseti yakhe neyakhe amakhonkco kunye nemodeli yakho yecamo oyithandayo kunye nezinto ezinzima, ezizinzileyo ezinokuma kuyo yonke imisebenzi yangaphandle oyithandayo ukuyenza kunye. Olunye uluvo? Phakamisa umbuzo ngeseti yomtshato ye-camo eqinisekileyo ukuba wow wow yakho enxibe i-camo lady. Ukusuka kwizitayile ezilula, zeli xesha ukuya kumabhanti aqhuqha kwi-bling, kukho isibini esifanelekileyo ukumela ibhondi yakho eyahlukileyo.
1. Xa ukhetha imitshato yakho yomtshato, ufuna into evakalelwa kungekuphela eyingqayizivele, kodwa imbonakalo yokwenyani yezitayile zakho kunye nobuntu bakho. Kwaye ngale ndlela yakhe mihle yecamo yomtshato ibekwe, akukho namnye kuni oya kuba nakho ukuhlawula nantoni na engaphantsi. Ukufakwa ngaphakathi kwe-camo okwenziwe ngokwezifiso (nangona siyithanda leprint Woodland!) Ngokuchasene necobalt chobalt chrome. Idayimani esetiwe nge-bezel yongeza ukubamba okumnandi kwindandatho yakhe. Yithenge: Isangqa seCamo esisetwe ngedayimani yebhele, $ 1,764, CamoKix.com
2. Ngaba ujonge amakhonkco omtshato abonisa ukuzibophelela kwakho komnye nomnye kunye nothando lwakho lwangaphandle? Iseti yomtsalane yemisonto yakhe yomtshato ye-camo kunye ne-camo enophawu lwe-Mossy Oak iya kwenza kanye loo nto- nangaphezulu. Ngoku uya kuba nesizathu sokunxiba ikamo yonke imihla yonyaka. Ungangena ebhodini ngaleyo, akunjalo? Yithenge: Eyakhe kunye neyakhe ehambelana ne-mossy oak duck blind camo ring ring set, $ 2,490, Umthombo wobucwebe, Amazon.com
3. Beka bucala loo mabhendi emveli. Yimani njengesibini ngokukhetha amakhonkco omtshato we-camo kwisitayile sakho se-camo. Le mivimbo yomtshato yaseVitalium epholileyo, enganyangekiyo inoku-odolwa iflethi okanye i-beveled kwaye iboshwe ngokukhetha kwakho i-Mossy Oak okanye i-Realtree camo ngenkangeleko ekude kakhulu. Yithenge: Ibhendi yomtshato waseCamo yakhe kunye neyakhe, $ 804, CamoKix.com
Zine. Ngelitye eliqaqambileyo le-zirconia elityeni elinye lebhendi, le seti ye-camo yokwaleka ine-shimmer ebonakalayo. Khetha le patheni mihle ye-Mossy Oak camo kwi-pink hue ebukekayo ngenkangeleko ekhethekileyo. Imiphetho egudileyo kwiiringi zetitanium zibonelela ngokulunga. Yithenge: Camo CZ titanium yomtshato iseti, $ 670, Etsy.com
5. Abantu belizwe abathanda i-Camo baya kuwela kule seti yakhe yenziwe kakuhle kunye neebhendi zomtshato zekamo ezenziwe nge-chrome eyomeleleyo, enganyangekiyo kunye ne-hypoallergenic cobalt. Awungekhe uhambe gwenxa kuyilo olungapheliyo kunye ne-King's camouflage woodland pattern inlay, onokuyitshintshela ukulungiselela ukuthanda kwakho. Iringi yakhe yi-8-millimeter band eneemilimitha ezi-5 zekamo kunye nomda we-grooved, ngelixa eyakhe ibhendi ye-5-millimeter iboshwe nge-3 yeemilimitha zekamo. Yithenge: Isakhelo sakhe sokufihla isakhelo, $ 930, CamoKix.com
6. Ukuba uyayithanda i-camo njengawe, le seti yomtshato yenziwa kunye naye engqondweni. Amakhonkco e-titanium abotshwe nge-camo ene-gloss ephezulu kwimodeli entle yokufihla iMossy Oak eya kuhambelana ngokuchanekileyo nasiphi na isimbo somtshakazi. Kwaye ungalibali ngayo yonke loo nto iblingayo. Umsesane wokuzibandakanya uvuza kwi-zirconia zetyhubhu ngenkangeleko etshabalalisayo yangaphandle. Yithenge: Iseti yomtshato kaTitanium Camo, $ 670, Etsy.com
7. Unokuba nezitayile ezahlukileyo ngokupheleleyo, kodwa le seti yokudibanisa yeekamo zomtshato zizinto eniza kuthi nibe nakho ukuvumelana ngazo nobabini. Yenziwe ngezikhonkwane ezinzima njenge-zirconium ezimnyama, la makhonkco ayisiyositayile kuphela, ayakhelwe ukuhlala-into oya kuyithanda bobabini, kunye ne-camo inlays ethetha ngokuthanda kwakho ngaphandle. Yithenge: Yakhe kunye neyakhe ilawulwa ngumsesane we-camo, $ 1,148, CamKix.com
8. Wow her (nangaphezulu!) Ngaphandle kweyodwa kodwa amakhonkco amabini abonisa uthando lwakhe lwangaphandle ngaphandle ngelixa ebonisa ubuhle bakhe, icala lobufazi kunye nale camo iseti yomtshato. Yenziwe ngentsimbi engenasici egutyungelwe kwi-camo epinki, iringi yokuzibandakanya ye-cathedral ine-6-millimeter inkosazana esike i-cubic zirconia yamatye kwaye ijikelezwe luthotho lwamatye asecaleni. Gcina ibhanti ehambelana nomhla womtshato okanye unxibe yona kwasekuqaleni xa ujonga eyona camo. Yithenge: Iseti yomtshato waseCathedral, $ 272, Iiswiti-Southern-shop.highwire.com
9. Elula, kodwa eyingqayizivele ngokupheleleyo, le seti yakhe kunye neekamo zakhe zomtshato camo bubungqina bokuba i-camo ngokuqinisekileyo inokuba yeklasi. I-Cobalt chrome material inika amakhonkco ukuqaqamba okufanayo kwegolide ebiza kakhulu okanye iplatinam, kodwa ngesibonelelo esongeziweyo sokukwazi ukusingatha nobona bunzima bendawo. Yithenge: Eyakhe kunye neyakhe ehambelana neRealtree AP yokufihla umsesane womtshato, $ 2,490, Umthombo wobucwebe, Amazon.com
10. Niya kukhanya nobabini ngokukhazimla ngezi zangqa zomtshato zingagqibelelanga zirconium camo. Kukulalanisa ngokugqibeleleyo- unokuba nayo ikamera ayifunayo, kwaye uyakhazimla. Ibhendi nganye yomtshato yenzelwe ukonwaba kwaye ine -05 bezel iseti yedayimane ejikelezwe ngamacandelo amabini e-Realtree camo inlay. Yithenge: Yakhe kunye nomsesane wakhe omnyama we-zirconium Realtree, $ 1,100, Titanium-Buzz.com
Imisesane yokuzibandakanya kweCamo
Ukuba ucwangcisa ukuphuma kombuzo nangaliphi na ixesha kungekudala, uya kufuna ukufumana umsesane omele isitayile sakhe. Kwaye ukuba isitayile seklasikhi ayisiyiyo eyakhe into, udinga into ebonakalayo ebonakalayo kwaye ibhenele kwimvakalelo yakhe ekhethekileyo. Inobuhle obuncinci, ilizwe elincinci, amakhonkco okubandakanya i-camo kufanelekile. Awuzukumoyisa ngeringi yohlobo oluthile ethetha nothando lwayo yonke into engaphandle, awuzukuyiphula ibhanki ukuyenza. Ezi zirconia zetyhubhu kunye neeringi zenyani zedayimani yokuzibandakanya iya kumnika idayimani ejongeka ayifunayo ngaphandle kwexabiso eliphakamileyo.
1. I-1-carat ye-cubic zirconia e-sparkler kwiseti ye-prong ezine ibamba umboniso kule ring elula yokuzibandakanya. Yenziwe ngesilivere ethandekayo, ibhendi iza kwiipateni ezili-10 zekamo, ukuze ukhethe umbala okanye uprinte olungele isitayile sakhe. Ngaphakathi kwindandatho igalelwe i-rhodium ukunqanda ukungcoliseka. Yithenge: Isangqa seCamo princess solitaire, $ 160, CamoRing.net
2. Nangona ingenakwenziwa ngezinto ezinamaxabiso aphezulu njengeplatinam okanye igolide, le ndandatho yokuzibandakanya yecamo yenza ingxelo eqinileyo. Ukuqhayisa nge-1.96-carat cubic zirconia ilitye kunye namatye amabini ecaleni .78-carat ahambelana neziko, le ndandatho yesiko ayinanto ngaphandle kwesitayile. Uyayithanda intombazana eqaqambileyo epinki enodaka epinki, kunye nayo yonke into eyongezelelekileyo evela kumcuphi okhethekileyo wamatye e-zirconia. Yithenge: Isangqa seCamo isikhumbuzo, $ 199, CamoRing.net
3. Le ringi yokudlala ye-camo yokudlala ilungele inkosazana, iyenza ukhetho olucacileyo kumzingeli ebomini bakho. Ilitye le-1-carat princess-cut cubic zirconia ilitye yiyo yonke into ayifunayo kunye nokunye, kunye ne-camo-plated sterling-silver band ipakisha ubuntu obuninzi kwaye iyafumaneka kwiipateni ezili-10 zekamo. Yithenge: I-Camo princess solitaire indandatho yokuzibandakanya, $ 160, CamoRing.net
Umama walokhwe unxiba
Zine. Isangqa sokuzibandakanya kwe-camo sibetha ibhalansi egqibeleleyo phakathi kokuphamba okungapheliyo kunye nomtsalane we-rustic ngelitye lesiko elisikiweyo lenkosazana, ukuqaqamba okuqaqambileyo kunye nokufakwa kwecamo. Ilitye le-5-carat cubic zirconia lisetelwe kwi-14-karat yegolide prong kwaye ibalaseliswa yibhanti eqaqambileyo ye-cobalt chrome. I-camo eyi-Realtree Timber camo yongeza umhlaba, i-organic touch naliphi na ibhinqa langaphandle liya kulithanda. Yithenge: Ukubandakanya umthi wecamo ring, $ 850, TheJew jewelrySource.net
5. Esi siqwenga se-camo sobucwebe sinokunxitywa njengendandatho yokuzibandakanya okanye njengokuhambelana nesitayile se-camo epinki efanayo (okanye enye iphethini ye-camo yokujonga umhleli). Iringi yenziwe ngesilivere entle kwaye ineenkosazana ezinqunqwe ngamatye, zenziwe ngamatye e-cubic zirconia. Yithenge: Ibar yeCamo CZ isete ibhendi yokuzibandakanya, $ 125, CamoRing.net
6. Ngaba intombazana yakho inkulu ngokubetha? Awungekhe ukwazi ukukhupha amawaka kwi-carat bauble, kodwa eli litye lenkosazana lisike i-zirconia ilitye eliza kumnika isibindi asifunayo ngaphandle kokophula i-bhanki. Isangqa semilimitha ezintandathu ububanzi sibekwa kwi-cobalt kwaye siyafumaneka kwi-Mossy Oak Obsession Camouflage inlay. Yithenge: I-Camo solitaire ngokuseta amatye e-CZ, $ 550, Ngokwe-Overstock.com
7. Umsesane wokuzibandakanya weklasikhi ongaqhelekanga kodwa, le ring ye-camo yeyentombazana yelizwe yase-sassy ethanda ukunxiba ikamo encinci. I-Mossy Oak Pink Break Up ye-camo ifakwe kwipolishi ephezulu ye-Vitalium band ye-polish ephezulu yeemilimitha ezintandathu. Elona candelo lilungileyo malunga nalo msesane? Inika inkangeleko yedayimane yokwenyani ngexabiso elifikelelekayo, kodwa unokukhetha ukuyitshintshela kwilitye lokwenyani kamva. Yithenge: I-CZ Mossy Oak isangqa sokubandakanya i-camo, $ 1,189, CamoKix.com
1. Akukho ndlela yokuphinda athethe nantoni na ngaphandle kokuba ewe xa umbonisa ngale nto ingummangaliso. Yenziwe nge-cobalt chrome, le ndandatho iya kuhlala ixesha lokuphila kunye nezinye. I-polish eqaqambileyo inika umbono weplatinam okanye igolide emhlophe kunye nezibini ngokugqibeleleyo ngombala opinki omthubi weRealtree AP Pink inlay. Yithenge: I-camo yamanenekazi angokoqobo .5-carat ring ring, $ 2,799, Realtree.com
2. Isangqa sokubandakanya i-camo sihambisa ngokungathandekiyo kwisitayile, kodwa asizukutshisa umngxunya kwisipaji sakho. Ukugqitywa kwe-chobalt ye-chobalt ye-gloss ephezulu kunye nelitye elisikiweyo lenkosazana linika umsesane ukubukeka okuqaqambileyo okuya kuhlala ixesha lihamba. I-camo inlay yenziwe ngokwezifiso kwaye yongeza umnxeba ophefumlelweyo entlango. Yithenge: Isangqa sokuzibandakanya kwe-camo ye-Princess, ukusuka kwi- $ 699, Titanium-Buzz.com
3. Phakamisa umbuzo ngeringi ngokuqinisekileyo lolunye uhlobo. Tsiba idayimane kwaye ukhethe ubukhazikhazi obusikwe ngesafire eqaqambileyo epinki endaweni yokutshiza umbala oza kumshiya engathethi. I-Realtree okanye i-Mossy Oak ibaleka embindini webhendi ebengezelayo yeringi yokuzibandakanya njengoko ungazange ububone. Yithenge: Isangqa se-camo yelitye elipinki, ukusuka kwi- $ 999, Titanium-Buzz.com
Zine. Ukuba ufuna umsesane wokuzibandakanya kunye nabalinganiswa abaninzi, yile. Ukucwangciswa koxinzelelo lwe-titanium kunye nokufihla okufakwayo kuyenza le nto ibe sisandi ngaphandle kwento eqhelekileyo. Ukuqaqamba okungacacanga kwelitye le-25-carat yedayimane kunye ne-pink camo camo yenza inkangeleko entle yobufazi eya kumenza wehle umhlathi. Ukuxhathisa, izinto ezingasindi kunye nebhendi eyoneleyo kuthetha ukuba angayenza yonke imisebenzi yangaphandle ayithandayo ngaphandle kokuyikhupha. Yithenge: Iseti yokuxabana kwendandatho yedayimane, $ 1,494, CamoKix.com
5. Isangqa sokuzibandakanya kwe-camo yecawe enkulu simvumela ukuba amkele uthando lwehlathi ngaphandle kokuyeka icala lakhe elithambileyo, lobufazi. Isangqa se-cobalt esine-sleek sinencopho ye-tapered, Realtree camouflage inlay ebaleka embindini kunye nedayimani elimnyama elimnyama kwimbonakalo engaqhelekanga eya kumenza ahlukane nesihlwele. Yithenge: Idayimani elimnyama elisikwe iringi yecamo, ukusuka kwi- $ 1,120, Titanium-Buzz.com
6. Le ndandatho yokuzibandakanya yenzelwe intombazana ethanda ipinki phantse kakhulu njengoko ithanda ikamo. Le ayisiyonto yakho yokuzibandakanya ephakathi - isafire epinki kunye nokuseta kobunzima kuyibeka yodwa. Yongeza umnxeba ngokobuqu ngokukhetha iipateni ezine zekamo ezahlukileyo ezivela kwiRealtree kunye neMossy Oak. Yithenge: Isangqa sentshontsho leCamo, ukusuka kwi- $ 1,200, Titanium-Buzz.com
7. Umsesane wokubandakanya ophefumlelweyo wentlango ngokuqinisekileyo uya kuba sisiqalo sencoko. I-enamel emnyama yokulandela umzobo okroliweyo kwicala ngalinye le-cobalt chrome band ubeke ukujija okungahambelaniyo kule ndandatho ilula. Ngelixa ufumana isuntswana lekhamera apha, sicinga ukuba linomtsalane nje wokubuya kwelizwe. Kukulalanisa okufanelekileyo kwizibini ezifuna ukudibanisa iklasikhi kunye nokungalindelekanga. Yithenge: Umkhondo wokulandelela iringi yokubandakanya, ukusuka kwi- $ 928, Titanium-Buzz.com
8. Nokuba ukhetha idayimani eyi-.25, .33 okanye .5 carats, le camo yokubandakanya indandatho isitayile kwaye iyamangalisa. Idayimani ihleli kwi-14-karat emhlophe yegolide emhlophe ebekwe kwindawo ephezulu ye-cobalt chrome band. I-camo inlay in Realtree okanye Mossy Oak camo isonga ijikeleze ibhendi yonke. Yithenge: Ibhanti yokuzibandakanya, ukusuka kwi- $ 1,045, Titanium-Buzz.com
9. Ukubukeka okwalahlekileyo okwangoku, khaba useto lwendabuko kuthintelo kwaye ukhethe okuthile okungaphezulu kwebhokisi. Isangqa sokubandakanyeka kwendandatho yedayimani yesitayile sihamba kakuhle kodwa sikunika incasa yokuphandle okukhulu. Idayimani esikwe inkosazana ihleli kwibhendi ye-chobalt chrome ephezulu ene-Realtree okanye i-Mossy Oak camo inlays kwicala ngalinye. Yithenge: Isangqa se-camo yedayimane, ukusuka kwi- $ 879, Titanium-Buzz.com
10. Izakhelwe kwiseti yebhokisi, uyilo lwale ngqungquthela yokuqhawula inkosazana ye-camo ephefumlelweyo iphefumlelwe ngumzingeli we-Tiffany Lakosky womboniso we-TV Ukutyhoboza noLee kunye noTiffany kwiChannel yangaphandle . Khetha kwi-Realtree AP, Max-4 okanye Pink Realtree AP camo yokuhombisa amacala e-cathedral-cut cobalt chrome band. Yithenge: I-Cathedral yinqumle isangqa se-camo, ukusuka kwi- $ 925, Titanium-Buzz.com
Apho unokuthenga khona amakhonkco omtshato waseCamo
Ngaphandle, ukuzingela kunye neekamo zomtshato zenziwa kwiivenkile ezininzi ezintle, kodwa ukuzifumana ekuhlaleni kunokuba ngumceli mngeni.
Indawo elula yokufumana amakhonkco akho omtshato we-camo kunye ne-camo yokubandakanya i-camo empeleni i-intanethi, ngakumbi ukuba ufuna i-camo-style camo kwiimpawu ezifana ne-Realtree, i-Mossy Oak kunye ne-King's Camo.
Ngaphambi kokuba uthenge i-camo umsesane womtshato kwi-intanethi, kuya kufuneka utyelele ijeeler yendawo ukuze ufumane ubungakanani kwaye uzame kwiindlela ezahlukeneyo zeringi ukuze ufumane umbono wento oyithandayo. Oku kuyakunceda ukuba uqiniseke ukuba ukhetha isitayile osithandayo. Uninzi lwamakhonkco omtshato we-camo enziwe ngezinto ezizezinye ezifana ne-tungsten, i-cobalt chrome, i-titanium kunye nentsimbi engenasici, oko kuthetha ukuba abanakukwazi ukuphinda benziwe ubungakanani kwakhona xa sele benziwe, ke kubalulekile uku-odola ubungakanani obuchanekileyo.
Okokugqibela, xa u-odola ubucwebe bakho bomtshato kwi-intanethi, kuya kufuneka ujonge iindleko zokuhambisa, ukurhoxisa kunye nokubuyisa umgaqo-nkqubo kwimeko apho uza kungena kuyo nayiphi na imiba ngeeringi zakho. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye inkxalabo, tsalela umnxeba kwinkonzo yabathengi ngaphambi kokufaka iodolo yakho.
Ezi ndawo zilandelayo zinikezela ngeyona minikelo ibanzi yemisesane ye-camo ekhoyo ngoku:
Titanium-Buzz.com (Lo ngomnye wabathengisi abaphambili bemitshato ye-camo kunye neeringi zokuzibandakanya. Banikezela ngohlobo olukhulu lwezitayile ezenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu, uninzi lwazo luyilelwe ngaphakathi endlwini.)
Etsy.com (Le yindawo entle yokufumana uhlobo lomtshato we-camo kunye neeringi zokuzibandakanya.
Sibeke ndawonye uluhlu lweevenkile zobucwebe ezithwala amakhonkco omtshato we-camo kwamanye amazwe anemfuno ephezulu. Ngaba uthenge enye kwimeko ongayiboniyo kolu luhlu? Sazise!
Indlu yefama yokupheka imibala
Zales kwaye Kay amatye anqabileyo ziivenkile ezimbini zokuhombisa ngobucwebe ezinendawo ezikulo lonke ilizwe ezinikezela ngemida yokufihla imitya yomtshato yamadoda. Izitayile ezixhaphakileyo ezibonelelwa kwezi venkile yicamo yasemkhosini, ukusukela kumhlaba wamaplanga esiqhelo ukuya kutoliko lwangoku kwimbala engwevu naluhlaza okwesibhakabhaka.
Iigwebu zikaGordon (iindawo ezininzi)
IiRogers Jewelers (iindawo ezininzi)
IiSamuels Jewellers (iindawo ezininzi)
I-Sissy's Log Cabin (iindawo ezininzi)
RK kunye neCo Jewellers
Ubucwebe beRiddle (iindawo ezininzi)
URobert Irwin Iigugu
I-Sissy's Log Cabin
URobert Irwin Iigugu (iindawo ezininzi)
Ukuba awunakufumana ijeeler ekufutshane nawe ephethe imisesane yokufihla umtshato, ungasoloko uhamba indlela yesiko. Uninzi lweejeelers zibonelela ngale nkonzo kwaye uya kuba nakho ukwenza umsesane owenzelwe ukuhambelana nezinto ozithandayo. Olu lukhetho olufanelekileyo ukuba unento ethile oyicwangcisiweyo okanye ubume bengqondo, njengoko uninzi lwamakhonkco emitshato ye-camo kwintengiso afumaneka kuphela kuluhlu olunqamlezileyo lweendlela kunye neenketho zokwenza ngokwezifiso.
iikowuti ezimnandi zesithandwa sakho
iikowuti zothando kuye
yintoni isipho seminyaka elishumi